Dawlada Puntland oo biyo-dhaamis & raashin qaybis ka bilawday degmooyin ka tirsan gobolka Nugaal. – Radio Daljir
Garowe, Mar 25 – Wafti balaaran oo wata gaadiidka booyadaha biyaha dhaamiya iyo kuwa macaawino raashin ah sida ayaa waxaa ay maanta u kicitimeen dhanka magaalada Buurtinle ee gobolka Nugaal.
Biya-dhaamiska iyo raashinka mucaawanada ah ayaa loo qaybiyey dadka ay abaaraha, biyo, iyo baad la’aantu ay saamaysay ee ku nool dhul-daaqsinka miyiga ah ee hoos yimaada Buurtinle.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali ‘Qarjab’ oo waftiga hogaaminayey ayaa sheegay in biya-dhaamiskaani uu yahay mid laga samayn doono dhamaan gobollada Puntland oo dhan; waxaana sida uu sheegay barbarsocon doona biyo-dhaamiskaan deeq raashin mucaawano ah oo ay dawlada Emaraadku (UAE) ugu deeqday Puntland, Taas oo la gaarsiiyey gobolada Sool, Sanaag, Mudug, Nugaal, iyo Cayn.
Md. Qarjab waxaa kale oo uu sheegay in ay ay biya-dhaamiska iyo mucaawanadaba gaarsiin doonaan degmooyinka kale ee gobolka Nugaal.
Hawlaha biya-dhaamiska ah ayaa waxaa ay ku soo beegmayaan xili abaaro baahsani ay saameeyeen gobolada Puntland, iyo gobollada kale ee Somaliya.
Cabdiraxman Xuseen Xasan ‘Gaardi’,